FBS ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ ကူးယူခြင်း ခံယူလိုပါက
၁။ အရောင်းအ၀ယ်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပါ (သို့) ရှိပြီးသားအကောင့်ကို သုံးပါ။
သင့်အရောင်းအ၀ယ်ပုံစံနဲ့ ကိုက်ညီမည့် အကောင့်အမျိုးအစားကိုရွေးပါ (သို့) ရှိပြီးသားအကောင့်နှင့် ချက်ချင်း စတင်ပါ။
၂။ အကောင့်စာမျက်နှာကို သွားပါ
သင့်ကိုယ်ပိုင်ဧရိယာသို့သွားပြီး၊ သင်ကူးယူခွင့်ပြုချင်သည့် အကောင့်တစ်ခုကို ရွေးပါ
၃။ ကူးယူမှု သတ်မှတ်ချက်များကို ဖွင့်ပါ
အရောင်းအ၀ယ်အကောင့် ဆက်တင်တွင် "CopyTradeနှင့် စတင်ဝင်ငွေရှာဖွေပါ" ကိုနှိပ်ကာ၊ သင့်ပရိုဖိုင်ကို ပြင်ဆင်ပြီး၊ လိုချင်တဲ့ ကော်မရှင်ရာခိုင်နှုန်းကို သတ်မှတ်ပါ။
၄။ ရောင်းဝယ်ပြီး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏ အမြတ်မှ ကော်မရှင်ရယူပါ။
"စတင်ပါ" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး၊ တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် သင့်ကော်မရှင် ရယူပါ။
အကောင့်ဖွင့်ပါ FBS အကောင့်ရှိပြီးသားပါ။
FBS CopyTradeဖြင့် သင့်နေ့စဉ်အရောင်းအ၀ယ်ကဏ္ဍများမှ ၀င်ငွေများပိုမိုရရှိနိုင်ပါသည်။ သင့်အရောင်းအ၀ယ်အကောင့်ကိုသာ FBS ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ကူးယူခွင့်ပြုလိုက်ပြီး၊ သူတို့အမြတ်များမှ ကော်မရှင်ရယူလိုက်ပါ။ လူတိုင်းနှင့် သင့်ကျွမ်းကျင်မှုကိုမျှဝေပြီး အခကြေးငွေရယူလိုက်ပါ!
အခြားမည်သည့်ဆော့ဖ်ဝဲအပိုကိုမှ ထည့်သွင်းရန် (သို့) မည်သည့်အပိုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုမှ လုပ်ရန်မလိုပါ – သင့်ကိုယ်ပိုင်ဧရိယာတွင် ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကိုသာ စတင်စေပြီး၊ ပုံမှန်အတိုင်းရောင်းဝယ်ခြင်း၊ လူတွေကို သင့်နည်းနာအတိုင်း လိုက်လုပ်ခွင့်ပြုခြင်းဖြင့် သူတို့ကို Forex မှာအောင်မြင်အောင်ကူညီပေးနိုင်တဲ့အတွက် ၀င်ငွေရယူလိုက်ပါ!
သင့်အကောင့်လုပ်ဆောင်ချက် ပိုကောင်းလေ၊ ပိုများတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက သင့်အော်ဒါများကို ကူးယူရန်ရွေးချင်ပြီး၊ ပိုများတဲ့အမြတ်များရလေ ဖြစ်သည်။
FBS CopyTrade နှင့် သင့်အရောင်းအ၀ယ်ကျွမ်းကျင်မှုများထဲမှ အများဆုံးကို ရယူပါ!
ကြီးမားတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအဖွဲ့အစည်းတွေက ကူးယူရန်အကောင့်များ အဆက်မပြတ်ရှာဖွေနေပြီး၊ သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် ပေးရန်အသင့်ဖြစ်နေကြပါတယ်။ ဒီအခွင့်အရေးကို အသုံးချပြီး FBS CopyTradeနှင့် အမြတ်များ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ တိုးပွားလိုက်ပါ!
ကူးခဲ့သော ထိပ်တန်းအရောင်းအ၀ယ်သမား ၅ဦး